Qorshaha Barlamaanka ee madaxwayne Mustaf Waa Laba daran mid dooro!. | ogaden24
Qorshaha Barlamaanka ee madaxwayne Mustaf Waa Laba daran mid dooro!.
Loolanka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxwayne Mustafe Muxumed Cumar iyo Hogaaminta xisbiga Haya Talada dawlada deegaanka Somaalida, ayaa kusii siqiya diilinta cas ama xariiqa ugu dambeeya ee uu Gaadho Heer Kulka siyaasadeed kudhisan Awood ku Hardanka.
Horay waxaa Khilaaf xoogan oo kusalaysan sad bursiga Awooda siyaasadeed ee Hogaaminta deegaanka ay ugu dhaxaysay madaxwayne Mustaf iyo Gudomiye Axmed Shide, waxaana xusid mudan inuu wali Taagan yahay Khilaafkaasi oo aanu soo Afjarmayn ilaa midkood meesha kabaxo.
Hadaba iyada oo Khilaafkaasi Taagan-yahay ayaa madaxwayne Mustaf oo ka Faa’iidaysanaya Taageerada shacabka waxaa u muuqatay inay lama Huraan Tahay inuusan iska dayacin Fursad meel dhow uga muuqatay oo uu ugu yaraan ku Wiiqi karo Kooxda ay iska soo Horjeedaan isaga oo u maraya dariiq Halis badan oo isaga Galaafan kara.
Barlamaanka DDS oo ah Awooda ugu saraysa ee sharci dajinta deegaanka dhamaantood waa xubno xisbi waxaana kujira, xubno badan oo Halis ku ah Hogaaminta madaxwayne Mustaf kuwaasi oo Hadii ay Gartaan Awooda ay leeyihiin kuna dhiiradaan si Fudud ugaga Takhalusi kara madaxwayne Cagjar iyo xukuumadiisa, xubnahaasi waxaa kamid ah Gudoonka ama Afhayeenka Barlamaanka.
Hadaba madaxwayne Mustaf iyo Barlamaanku way is xaal Og-yihiin walibana way is Gaadayaan oo madaxwayne Mustaf waxaa uu mar Hore sii Qortay Waraaq ay kuqoran-yihiin tira kamid ah xilibanada oo uu doonayo in xasaanada laga Qaado, isaga oo ku Eedaynaya inay Qayb ka ahaayeen Kooxdii Heego iyo mashaqadii 4-ta bishii August kadhacday magalada Jigjiga.
Go’aankani xasaanad ka xayuubinta ah waamid Halis badani ku xeeran tahay waxaana Kooxdani ay Garab kahelayaan Gudomiye Axmed Shide oo Gar iyo Gardaraba ku Khasban inuu difaaco sababtoo ah mar waa xilibano marna waa xubno xisbi oo wuxuu Rajo kaqabaa inuu shirwaynaha uga Faa’iidaysto kulana dagaalamo Kooxda madaxwayne Mustafe oo Taageero xisbi aan Haysanin.
Hadaba xaalka madaxwayne Mustaf waa Laba daran mid dooro.
” Waa mida 1-aade Qorshihiisa xasaanad kaxayuubinta xilibaanada kudhowaad 30-ka ah xogtiisu way baxday oo Hadii uu kanoqdo isagaa Kawaanka saaran oo waxaa suuragal ah in shirwaynaha xisbiga kahor codka Kalsoonida loo Qaado, Hadii ay taasi dhacdana Mustafe Hal cod ah kama Heli doono xilibanada Barlamaanka oo u arka masiibo dusha lagaga keenay.
” Waa mida Labaade Hadii uu kudhiirado oo Ajandaha kudarsado in xasaanada laga xayuubiyo 30- xiliban way adag tahay in codku u dhaco sida uu Rabo, waayo waxaa Horay saaxada u baneeyay tiro xilibaano ah hadii tira kale oo intaas dhan ay kadaba Tagaana waxaa meesha kabaxaya Kooramkii uu kala Fadhiga Barlamaanku kusii socon lahaa, sidaa daraadeed intii iyagu ay saaxada banayn lahaayeen waxaa u Fudud inay Mustafe is dhaafiyaan iyaga oo Jiritaankooda difaacanaya.
24-kii saac ee Lasoo dhaafay xubnaha Barlamaanka waxaa kudhex Jiray xubno abaabulan oo Hal-kudhagoodu yahay ninkii Qayrki loo xiirayow madaxa soo Qoyso, taasi oo lamicna ah in Ajandaha xasaanad iyo xil kaxayuubinta ah ee Mustafe in isaga lagu Gadiyo, waxay se wax kaste cadaan doonaan saacadaha iyo maalmaha inagu soo Fooleh waa Hadii uu madaxwayne Mustaf kudhiirado Qorshihiisa xasaanad kaxayuubinta Horinta xilibaanada ah e.